ट्याग: शीर्षक Martech Zone
कुनै पनि व्यवसायको लागि उनीहरूको वेबसाइटमा दृश्यहरू, क्लिकहरू र रूपान्तरणहरू बढाउनको लागि टेस्टिंग एक शीर्ष साधनको रूपमा प्रमाणित हुन जारी छ। ल्यान्डि pages पृष्ठहरूका लागि परीक्षण रणनीति निर्माण गर्दै, कल-टु-एक्शनहरू, र ईमेल तपाईंको मार्केटिंग तालिकामा हुनुपर्छ। राम्रो खबर? लगभग केहि पनि अनुकूलन को लागी परीक्षण गर्न सकिन्छ! नराम्रो खबर? लगभग केहि पनि अनुकूलन को लागी परीक्षण गर्न सकिन्छ। तर हाम्रो नयाँ इन्फोग्राफिक तपाईंलाई सुरू गर्न केहि राम्रो ठाउँहरू देखाउँदछ। A / B मा जम्प गर्दै